Jeneraal Birhaanuu Juulaa adda waraanaa Walloo Kibbaatti hoggantootaa fi raayyaa ittisa biyyaa waliin mari’atan – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Jeneraal Birhaanuu Juulaa adda waraanaa Walloo Kibbaatti hoggantootaa fi raayyaa ittisa biyyaa waliin mari’atan
On Sep 18, 2021 620
Finfinnee, Fulbaana 8, 2014 ( FBC)- Eetaamaajooriin Waliigalaa Raayyaa Ittisa Biyyaa Jeneraal Birhaanuu Juulaan adda waraanaa Walloo Kibbaatti argamuun hoggantootaa fi raayyaa ittisa biyyaa waliin mari’ataniiru.
Turti isaaniin raayyaan ittisa biyyaa injifannoowwan galmeessiseerratti mar’ataniiru.
Marichaan Ityoophiyaa diiguuf diinoota biyyaa keessaa fi alaa waliin hojjechaa kan jiru garee shororkeessaa ABUT barbadeessuuf hanga ammatti injifannoo jiru dabaluuf ciminaan hojjetamuu akka qabu Jeneraal Birhanuun himaniiru.
Gareen shororkeessaa ABUT Ityoophiyaa diiguuf tattaaffii taasisuu kayyoosaa galmaan ga’uu hin danda’uu jedhaniiru.
Jeneraal Birhanuun gareen gootichaa raayyaa ittisa biyyaatin barbadeeffamaa jiraachuus himaniiru.
Injifannoo raayyaa ittisa biyyaa galmeessisaa jiruufis galateeffataniiru.
Hirmaattooni marichaa akka himaniitti, raayyaa ittisa biyyaa yeroo ammaa kana ejjennoo guutuurra jiraachuu mirkaneessuu ragaan ministeera raayyaa ittisa biyyaarra ragmee ni muul’dhisa.